လူကြီးမင်း၏ ခရီးစဉ်ကို ရက်ထပ်တိုးခြင်း - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
လူကြီးမင်း၏ ခရီးစဉ်ကို ရက်ထပ်တိုးရာတွင် စဉ်းစားရမည့် အချက်များ
လူကြီးမင်းအနေနဲ့ ကျန်းမာရေးအကြောင်းရင်း တရပ်ရပ်ကြောင့် ရက်ကိုထပ်တိုးဖို့ လိုအပ်လာရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေက ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ အကူအညီပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုဌာန (Customer Service) ကလည်း လိုအပ်တဲ့ ဗီဇာသက်တမ်းတိုးတာတွေကို ဆောင်ရွက်ပေးမယ့်အပြင် လိုအပ်တဲ့ ဆေးဝါးစာရွက်စာတမ်းတွေ သက်သေခံလက်မှတ်တွေကို ထုတ်ပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းအနေနဲ့ သူတို့နဲ့ ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင် ကျေးဇူးပြုပြီး svhrefer@samitivej.co.th ကို အီးမေးပို့ပေးစေလိုပါတယ်။
ဒီဝန်ဆောင်မှုအတွက် လူတစ်ဦးကို ထိုင်းဘတ် ၅၀၀ (ဗီဇာသက်တမ်းတိုးခ ထိုင်းဘတ် ၁၉၀၀ မပါဝင်ပါ) ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျသင့်ငွေဟာ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးကို ပေးပို့ရမယ့် စာရွက်စာတမ်းအားလုံးကို ဆောင်ရွက်ရတဲ့ ကုန်ကျစရိတ် ဝန်ဆောင်မှု အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးဝါးကုသမှုဗီဇာနဲ့ ရောက်လာတဲ့ လူနာနဲ့အတူ လိုက်ပါလာသော မိသားစုဝင်တွေကလည်း တူညီတဲ့ ဗီဇာသက်တမ်းအတိုင်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နိုင်ငံတကာဌာနကို ကနဦးဆက်သွယ်တဲ့ အချိန်မှာပဲ အတူပါ၀င်မယ့် ခရီးသွားတွေကိုပါ တခါတည်းထည့်ပြီး စာရင်းသွင်းဖေါ်ပြပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုဌာန (Customer Service) ကလည်း လိုအပ်တဲ့ ဗီဇာသက်တမ်းတိုးတာတွေကို ဆောင်ရွက်ပေးမယ့်အပြင် လိုအပ်တဲ့ ဆေးဝါးစာရွက်စာတမ်းတွေ သက်သေခံလက်မှတ်တွေ အားလုံးကိုလည်း ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဗီဇာလျှောက်ထားမှုနဲ့ သက်တမ်းတိုးမှုကိစ္စရပ်များအတွက် ကျွန်တော်တို့ Samitivej မှ ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတာသာဖြစ်ပြီး ဗီဇာ (Visa) သက်တမ်းတိုး/မတိုး အာမခံပေးခြင်းမဟုတ်ကြောင်း သတိပြုစေလိုပါတယ်။ မိသားစုဝင်တွေဟာ လူနာနဲ့ တရားဝင်တော်စပ်ကြောင်းကို မွေးစာရင်းလိုမျိုး ဒါမှမဟုတ် လက်ထပ်စာချုပ်လိုမျိုး စာရွက်စာတမ်းတွေကို တင်ပြပြီး သက်သေခံပေးဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။ တော်စပ်ကြောင်း အထောက်အထားနဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ မှန်မှန်ကန်ကန်ရှိတယ်ဆိုရင်တောင်မှ လျှောက်ထားသူကို ဗီဇာသက်တမ်းတိုးခွင့် ပယ်ချကောင်း ပယ်ချနိုင်ပါသေးတယ်။
Anakawan Ingprasarn, M.D.
Chonthicha Satirapod, M.D.
Assistant professor Tassanee Sookpranee, M.D.